ခေါငျးတခွမျးကိုကျခွငျးကို ထပျမဖွဈပျေါစမေယျ့ သဘာဝ အစားအစာ (၈) မြိုး
HomeKnowledgeခေါငျးတခွမျးကိုကျခွငျးကို ထပျမဖွဈပျေါစမေယျ့ သဘာဝ အစားအစာ (၈) မြိုး
ခေါငျးတခွမျးကိုကျခွငျးက မလိုခငျြဘဲ ရောကျလာတတျတဲ့ ဧညျ့သညျ ပါပဲ။ ခေါငျးတခွမျးကိုကျတဲ့ ဝဒေနာ တခွားဝဒေနာတှေ ပိုဆိုးပါတယျ။ သကျသာဖို့ ဆိုရငျ ဆေးသောကျတာတို့၊ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျတာတို့နဲ့ ကုသလို့ ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆေးသောကျရငျ ခဏပဲ ပြောကျကငျးပွီး နောကျထပျ ဖွဈလာနိုငျပါသေးတယျ။ ခေါငျးကိုကျတာကို အစားအစာနဲ့ ကာကှယျလို့ ရပါတယျ။
ထောပတျသီးက ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာကို ကာကှယျပေးပါတယျ။ ထောပတျသီးမှာ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့ ပါဝငျတာကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျတာ လှငျ့စငျသှားမှာပါ။
သဖနျးသီးက ခန်ဓါကိုယျ ကနျြးမာရေးအတှကျ အကြိုးပွုပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ခေါငျးကိုကျတဲ့အခါ သဖနျးသီးကို စားသငျ့ပါတယျ။ သဖနျးသီးမှာ ပိုတကျဆီယမျပါဝငျတာကွောငျ့ ရောငျရမျးနာကငျြတာတှလေညျး ပြောကျစတေယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ ပွောပါတယျ။
ဆျောလမှနျငါးမှာ အိုမီဂါ 3၊ ဗီတာမငျ B2 ပါဝငျတာကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျသူတှအေတှကျ စားသငျ့တဲ့ အစားအစာပါပဲ။ အဲဒါကွောငျ့ ဆျောလမှနျငါးကို ပုံမှနျစားပေးရငျ ခေါငျးကိုကျတာကို နှုတျဆကျလို့ ရပါပွီ။
ကနျစှနျးဥက အရသာရှိရုံမက ခေါငျးတဈခွမျး ကိုကျတာကိုလညျး ပြောကျစပေါတယျ။ ဗီတာမငျ B1, ပိုတကျဆီယမျတှကေ ကနျစှနျးဥထဲမှာ အမြားအပွား ပါဝငျတာကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျ သကျသာစပွေီး စိတျကိုလညျး တညျငွိမျစေ ပါတယျ။
5. ဖရဲသီးနှငျ့ မုနျလာဥဝါ
ဖရဲသီး၊ မုနျလာဥဝါ၊ သခှားသီး၊ တရုတျနံနံတို့မှာ ရဓေါတျတှေ အမြားကွီးပါဝငျပါတယျ။ ရဓေါတျခနျးခွောကျလာရငျ ခေါငျးကိုကျလာတတျလို့ ရသေောကျတာဖွဈဖွဈ၊ ရဓေါတျပွညျ့ဝတဲ့ အသီးတှကေို စားတာပဲဖွဈဖွဈ ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။
6. Quinoa နှငျ့ ဆလပျရှကျ
Quinoa ဆိုတာ ဆနျအစားထိုး စားလို့ရတဲ့ စားစရာတဈခုပါ။ Quinoa နဲ့ ဆလပျရှကျမှာ မဂ်ဂနီဆီယမျနဲ့ သံဓါတျ ပါဝငျတာကွောငျ့ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာကို ကာကှယျပွီးသားပါ။ ဆလပျရှကျမှာ အိုမီဂါနဲ့ အမြှငျဓါတျ ပါဝငျတာကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျတာကို ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ဒိနျခဉျြမှာ ဗီတာမငျ B ပါဝငျပါတယျ။ ဒိနျခဉျြကို ပုံမှနျစားပေးရငျ ခေါငျးကိုကျတဲ့ အကွိမျရေ တဖွညျးဖွညျး နညျးသှားမှာပါ။
ဗီတာမငျ C ပွညျ့ဝတဲ့ သံပရိုသီးက ခေါငျးတခွမျး ကိုကျခွငျး အတှကျ သငျ့တျော ပါတယိ။ သံပရိုသီးအရညျနဲ့ ဆားကို ဖြျောသောကျရငျ အခြိနျတိုအတှငျး ခေါငျးကိုကျ သကျသာသှားမှာပါ။
သဈကွံပိုးမှုနျ့ကို ရနေဲ့ဖြျောပွီး ပဈြအောငျမှပေါ။ ပွီးရငျ ခေါငျးကိုကျတဲ့အခါတိုငျး နားထငျနဲ့ နဖူးမှာ လိမျးထားပါ။ ဒီနညျးက လငျြမွနျပွီး ထိရောကျပါတယျ။ မိနဈ 30 လောကျကွာရငျတော့ ရဆေေးခလြိုကျလို့ ရပါပွီ။
ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်းကို ထပ်မဖြစ်ပေါ်စေမယ့် သဘာဝ အစားအစာ (၈) မျိုး
ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်းက မလိုချင်ဘဲ ရောက်လာတတ်တဲ့ ဧည့်သည် ပါပဲ။ ခေါင်းတခြမ်းကိုက်တဲ့ ဝေဒနာ တခြားဝေဒနာတွေ ပိုဆိုးပါတယ်။ သက်သာဖို့ ဆိုရင် ဆေးသောက်တာတို့၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတို့နဲ့ ကုသလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးသောက်ရင် ခဏပဲ ပျောက်ကင်းပြီး နောက်ထပ် ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာကို အစားအစာနဲ့ ကာကွယ်လို့ ရပါတယ်။
ထောပတ်သီးက ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ပါဝင်တာကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာ လွင့်စင်သွားမှာပါ။
သဖန်းသီးက ခန္ဓါကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးပြုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါ သဖန်းသီးကို စားသင့်ပါတယ်။ သဖန်းသီးမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်တာကြောင့် ရောင်ရမ်းနာကျင်တာတွေလည်း ပျောက်စေတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဆော်လမွန်ငါးမှာ အိုမီဂါ 3၊ ဗီတာမင် B2 ပါဝင်တာကြောင့် ခေါင်းကိုက်သူတွေအတွက် စားသင့်တဲ့ အစားအစာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ဆော်လမွန်ငါးကို ပုံမှန်စားပေးရင် ခေါင်းကိုက်တာကို နှုတ်ဆက်လို့ ရပါပြီ။
ကန်စွန်းဥက အရသာရှိရုံမက ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်တာကိုလည်း ပျောက်စေပါတယ်။ ဗီတာမင် B1, ပိုတက်ဆီယမ်တွေက ကန်စွန်းဥထဲမှာ အများအပြား ပါဝင်တာကြောင့် ခေါင်းကိုက် သက်သာစေပြီး စိတ်ကိုလည်း တည်ငြိမ်စေ ပါတယ်။
5. ဖရဲသီးနှင့် မုန်လာဥဝါ
ဖရဲသီး၊ မုန်လာဥဝါ၊ သခွားသီး၊ တရုတ်နံနံတို့မှာ ရေဓါတ်တွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်လာရင် ခေါင်းကိုက်လာတတ်လို့ ရေသောက်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ရေဓါတ်ပြည့်ဝတဲ့ အသီးတွေကို စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
6. Quinoa နှင့် ဆလပ်ရွက်
Quinoa ဆိုတာ ဆန်အစားထိုး စားလို့ရတဲ့ စားစရာတစ်ခုပါ။ Quinoa နဲ့ ဆလပ်ရွက်မှာ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ သံဓါတ် ပါဝင်တာကြောင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာကို ကာကွယ်ပြီးသားပါ။ ဆလပ်ရွက်မှာ အိုမီဂါနဲ့ အမျှင်ဓါတ် ပါဝင်တာကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာကို ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ဒိန်ချဉ်မှာ ဗီတာမင် B ပါဝင်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ကို ပုံမှန်စားပေးရင် ခေါင်းကိုက်တဲ့ အကြိမ်ရေ တဖြည်းဖြည်း နည်းသွားမှာပါ။
ဗီတာမင် C ပြည့်ဝတဲ့ သံပရိုသီးက ခေါင်းတခြမ်း ကိုက်ခြင်း အတွက် သင့်တော် ပါတယိ။ သံပရိုသီးအရည်နဲ့ ဆားကို ဖျော်သောက်ရင် အချိန်တိုအတွင်း ခေါင်းကိုက် သက်သာသွားမှာပါ။
သစ်ကြံပိုးမှုန့်ကို ရေနဲ့ဖျော်ပြီး ပျစ်အောင်မွှေပါ။ ပြီးရင် ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါတိုင်း နားထင်နဲ့ နဖူးမှာ လိမ်းထားပါ။ ဒီနည်းက လျင်မြန်ပြီး ထိရောက်ပါတယ်။ မိနစ် 30 လောက်ကြာရင်တော့ ရေဆေးချလိုက်လို့ ရပါပြီ။